» “अमेरिकी सहायक, विदेशमन्त्री, लुले भने- ‘मंसिर २८ सम्म” एमसीसी, पास गर्नु’ के गर्लान् देउवा ? “अमेरिकी सहायक, विदेशमन्त्री, लुले भने- ‘मंसिर २८ सम्म” एमसीसी, पास गर्नु’ के गर्लान् देउवा ? – हाम्रो खबर
“अमेरिकी सहायक, विदेशमन्त्री, लुले भने- ‘मंसिर २८ सम्म” एमसीसी, पास गर्नु’ के गर्लान् देउवा ?
हाम्रोखबर संवाददाता 174 Views
“काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा, रहेका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससीसी) सम्झौता नेपालले लिने कि नलिने भन्ने यही मंसिर २८ गतेसम्म टुंगो गर्न, समयसीमा दिएका छन् ।”
“त्यतिन्जेलसम्म, नेपालले, टुंगो, नगरे अमेरिकाले यो सहयोग अन्यत्र लैजानेबारे विकल्प अघि बढाउने उनले बताएका छन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको शुक्रबारको भेटमा सहायक विदेशमन्त्री लुले समयसीमा तोकेर एमसीसीबारे निर्णय गर्न भनेका हुन् ।”
‘नेपालले एमसीसी, सम्झौता अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने १४ डिसेम्बरसम्म भन्नु पर्‍यो । हुन्छ कि हुन्न भन्ने जवाफ चाहियो । नत्र अयन्त्र ट्रान्सफर गर्छौं भन्नु भएको छ’ दाहालसँगको भेटमा, भएको कुराकानीबारे उनका स्वीकय सचिव रमेश मल्लले भने ।”
भेटमा अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उनले विदेशीहरू सहयोग लिने विषयमा नेपाल सकारात्मक नै रहेको तर एमसीसी सम्झौता कागजातका कारण नेपालमा अहिले बहस चलिरहेको बताएका थिए ।”
“एमसीसी उपाध्यक्ष फर्किइन्, प्रमुख ६ दलले के भने ?
“सहायमन्त्री लुले शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटेर एमसीसीको विषयमा प्रश्न गरेका छन् ।”
“उनले यसबारे एमालेको धारणा के हो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार अध्यक्ष ओलीले आफूहरू विपक्षमा रहेकाले यो विषयमा सत्तारुढ दलले केही नभनेको बताएका थिए ।”
‘यसअघि एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि यही प्रश्न सोध्नुभएको थियो’, ओलीको सहायकमन्त्री लुसँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भने, ‘हामी अपोजिसनमा छौं ।”
“गठबन्धन सरकारले यो विषयमा हामीलाई सोधेको छैन । पारित गर्न उनीहरूको पर्याप्त मत छ त्यसैले यो विषयमा नसोधेको होला ।’